Usuku: 10 Okthoba 2019
Isicelo Somshuwalense Wezempilo Osetshenzisiwe we-TCDD kanye Nezisebenzi ze-DHMİ
Umphathi Wezokuvakasha-Sen, DHMİ kanye namaqondisi Jikelele we-TCDD ngokubhalela abasebenzi bafaka isicelo. USihlalo Wezokuvakasha-Sen uSenan Caliskan esitatimendeni; “Izidingo ze-DHMİ ne-TCDD'den zihlobene nemasende etafuleni yokuxoxisana [Okuningi ...]
Isobho Esishisayo sabafundi ezikhungweni ze-Ankara Metro
UMansur Yavaş, iMeya kaMasipala wase-Ankara Metropolitan, uthola ukwedlula zonke izicelo zedolobha. IMeya uJavaş inikeza izindaba ezinhle kubafundi abafunda enhlokodolobha ukusuka ezephungweni zamanzi ukuya kwezokuhamba, izindlela zamabhayisekili nekhadi lokubhalisa. [Okuningi ...]
IMeya kaMasipala waseKayseri Metropolitan UMemduh Büyükkılıç, eqala ngesikhathi sasehlobo somsebenzi omkhulu wokuvuselela ama-boulevards, uthe. UMongameli Büyükkılıç, umgwaqo weBaghdad usuphothuliwe futhi umsebenzi ovuselelwe unikezwa umphakathi uthe. UMasipala Wamadolobha Amakhulu [Okuningi ...]
UMnyango Wezamasiko Nezokuvakasha uvula umtapo wezincwadi wezindiza i-Istanbul, ozobamba imibhalo engaphezu kwenkulungwane ye2, kubandakanya namakhulu wemisebenzi yokuwina umklomelo kaNobel. Ukusuka kumtapo wezincwadi ukuya ezindaweni zokudlala zezingane, umtapo wezincwadi uzoba indawo yokuphumula yamasiko lapho abagibeli bengachitha khona isikhathi. [Okuningi ...]
Turkey sesitimela Machines Corporation (TÜDEMSAŞ) basezindlini kusukela kuqala kuwo amakhanda ezitimela amabili umuntu wathandazela amasosha ukufunda Surat al-Fath ngobuningi phambi Booth. I-Republic of Turkey State Railways (TCDD) ekukhiqizeni amakhanda nempahla izinqola [Okuningi ...]
I-17 Bilion Lira
Ihlelwe ngaphansi kwesisekelo soMnyango Wezokuthutha Nengqalasizinda, ngosizo lobuchwepheshe loMqondisi Jikelele Wezingqalasizinda Zokutshalwa Kwengqalasizinda, iDirectorate General of Highways kanye ne-International Roads Federation (IRF). Imigwaqo yamazwe omhlaba jikelele, amabhuloho kanye namaThanel Specialised Fair yavula iminyango yayo. UNgqongqoshe uTurhan, eCongresium e-Ankara [Okuningi ...]
I-Uygun: 'Amalungiselelo weLine Railway Lines ayaqhubeka'
4. Amabhuloho oMgwaqo oMhlaba oMhlaba jikelele kanye neMigudu Ekhethekile Fair III. Imikhosi yokuvula i-International Metrorail Foramu yemikhosi i-9 ngo-Okthoba 2019 ibibanjelwe e-Ato Congresium ngokubamba iqhaza kukaNgqongqoshe Wezokuvakasha kanye Nezingqalasizinda Mehmet Cahit Turhan. [Okuningi ...]
Izingozi Zesitimela eKütahya! .. Umuntu we-1 Hard 2 Walimala
Kulimale abantu ababili elolini le1 eKütahya lapho isitimela sezimpahla sishaye khona lapho bewela khona. Izakhamizi zibikele ingozi endaweni yesehlakalo, abezokwelapha bathatha abalimele esibhedlela. Kwafundwa ukuthi isimo somuntu oyedwa sasisibi. Ukuxoshwa kwe-24274 okusetshenziswa nguMachinist BC [Okuningi ...]
Sihlanganise okuvelele kakhulu okutshaliwe kwezimali eChina emazweni amaningi ngaphakathi kweBelt Road Project. [Okuningi ...]
RayHaber I-10.10.2019 Tender Bulletin
I-TÜLOMSAŞ I-Fire Service Service Service TCDD Led Lamp Thenga Izitimela Ezifana Nezitimela Nezinye Izindaba Ungaba Nesithakazelo KuzoRayHaber I-25.01.2019 Tender Bulletin 25 / 01 / 2019 Akunamarekhodi ethenda we-25.01.2019 kusistimu yethu.RayHaber Indali ye-04.02.2019 [Okuningi ...]
I-Bursa Governorship Ithatha Isenzo se-Uludağ
Ihhovisi Bursa likahulumeni uye walungisa umbiko olunzulu ngifuna izinsuku ubudala, kuqala ski resort eTurkey. Umbiko, ogcizelela ukwenziwa kwesimanjemanje kwe-Uludağ, wethulwa e-Ankara. ski resort eTurkey lokuqala Uludag, yamemezela UNdunankulu Recep Tayyip Erdogan "ukuze xnumx't [Okuningi ...]
Abakwa-Suburban Wagons Badingiselwa Ukuya Kume eKöseköy
Isitimela sabagibeli abasebenza phakathi kukaGebze noHaydarpaşa sashiywa lapho uKöseköy engakasebenzi khona lo msebenzi, isitimela sabagibeli, esidilizwa ngemuva kokusebenza ngesivinini esikhulu, silindile sisendaweni engenamsebenzi eKöseköy Logistics Center. Inqwaba yezinqola ngaphezulu kwe-5 [Okuningi ...]
I-YHT Expeditions Yokwanda Ngama-YHT Amasha ku-2020
Umphathi Jikelele Wezokuhamba kwe-TCDD, uKamuran Yazıcı, uhambele izingqungquthela ngaphakathi kwe-CD TCDD Transportation Inc. 2019 Year Fall In-Service Training Programme gerçekleştiril ebanjelwe eKuşadası. Ukwenza inkulumo kwabahlanganyeli lapha, u-Yazıcı wachaza izinqubomgomo zokuhamba ezilandelwa kusukela nge-2003. [Okuningi ...]
I-7 Ukutholwa okulula kweGebze Technology University kusuka Ngemigqa Ehlukile
Omunye wabasebenzisana noMasipala waseKocaeli Metropolitan, wezokuThuthaPark A.Ş. Inikezela ngezinsizakalo zokuhamba eziya eGebze Technical University (GTÜ) ngemigqa ehlukene ye-7. Ngamabhasi avela ezifundeni ezahlukahlukene, i-7 inikeza abafundi izibonelelo zokuhamba ezilula zokuya eyunivesithi. Ezokuhamba kanye [Okuningi ...]
Amahara wehhovisi leselula eKaramürsel
IKocaeli Metropolitan Municipality Department of Transportation and Traffic Management, ihhovisi elihamba ngezimoto elihamba ngezimoto eziqala ukubhekana nezidingo ezandayo ezikhungweni zamakhadi okuhamba, latshalwa ogwini lweKaramürsel. IMahhovisi E-Mobile Office izosebenzela izakhamizi kuze kube uLwesihlanu eKaramürsel. IVIKI le-1 [Okuningi ...]
Qopha inhlawulo yomkhumbi ongcolisa iGulf of Izmit
UMasipala waseKocaeli Metropolitan uyaqhubeka nemizamo yakhe yokuvikela i-Izmit Bay. Kulokhu, ukuhlola imibiko evela emaqenjini e-Environmental Management afake umkhumbi weGulf of Izmit Cook Islandd Banda owomile wabhala inhlawulo. AMAQEMBU ATHATHELWE ISAZISO Kocaeli Metropolitan [Okuningi ...]
UMasipala waseKocaeli Metropolitan uyaqhubeka nokuletha amandla amakhulu amasha kanye nesimanje edolobheni futhi uyaqhubeka nokusebenza kulo msebenzi. Imishini neminye imisebenzi yokwakha iyaqhubeka e-Çetin Emeç Overpass Bridge, isidumbu sayo sensimbi sibekwe emilenzeni ngenyanga edlule. [Okuningi ...]
IMeya ye-İzmir uTunç Soyer wabamba iqhaza kuvulwa kweMAKTEK İzmir Fair. Inkampani ye-370 evela emazweni ayishumi nesikhombisa abambe iqhaza kwiMAKTEK Fair (Amathuluzi Omshini, Amathuluzi Okucubungula iMetal-Sheet, Amathuluzi Okubamba, Ukusika Kwekhwalithi, I-CAD / CAM, Isoftware ye-PLM ne Production) [Okuningi ...]
Ingqungquthela Yezimali Zamarobhothi kanye Nezimboni 4.0 Izicelo Zengqungquthela 1-3 Okthoba 2019 izinsuku zabanjwa eJeşilköy Istanbul. Izingqinamba zobuchwepheshe bokukhiqiza zivakashelwe ngabantu be-10 ngokwenyuka ngamaphesenti we-7.064 ngonyaka owedlule. Imboni Media, ukukhiqizwa ngokuyinhloko 'ku-ajenda [Okuningi ...]
I-FESPA Eurasia 2019 yokuhlangana ne-Eurasia e-Istanbul
Ukubala kwehle kuqale i-FESPA Eurasia, okuhola phambili kokuphrinta kwesifunda sase-Yurasian, lapho lo mkhakha ujabule khona. I-FESPA Eurasia 2019, i-5-8, lapho sekubhalisile ukubhaliswa ku-inthanethi, yaqala umhlaba wokukhangisa nezimboni e-Istanbul Expo Center ngoDisemba. siyohlanganisa kanye. [Okuningi ...]